Wararka - Munaasabadda abaalmarinta shaqaalaha aadka u wanaagsan Janaayo 27th, 2021
Kormeerka Daawashada Dadweynaha
4K Birta Taxanaha
Taxanaha caaga ah ee 4K
MM27 taxane qalooca
YM32 Taxanaha qalooca
Xafladda abaalmarinta shaqaalaha aadka u wanaagsan Janaayo 27th, 2021
Xaflada abaalmarinta shaqaalaha aadka ufiican sanadka 2020 ayaa shalay galab lagu qabtay Display Perfect. Ay saameysay mawjadda labaad ee COVID-19. Dhammaan asxaabtu waxay ku soo urureen saqafka 15F si ay uga qaybqaataan xafladda abaalmarinta sannadlaha ah ee shaqaalaha aadka u wanaagsan. Shirka waxaa daadihinayey Chen Fang oo ka tirsan xarunta maamulka.
Wuxuu yiri, sanadka aan caadiga aheyn ee 2020, dhamaan asxaabteena shaqaaluhu way ka gudbeen dhibaatooyinka waxayna gaareen guulo lagu farxo, taas oo kujirta dadaalka wadajirka ah ee dhamaan asxaabteena. Shaqaalaha maanta taagan waa wakiillo uun. Waxay leeyihiin astaamo guud: waxay u tixgeliyaan shaqada inay tahay himiladooda waxayna ku raad joogaan heer sare. Xitaa shaqooyinka ugu caadiga ah, waxay naftooda ku dalbadaan heerarka ugu sarreeya. Waxay ka walaacsan yihiin shirkadda, u heellan oo diyaar u ah inay wax ku darsadaan.
Chen Fang ayaa tilmaamtay: shaqaalaha si aamusnaan wax ku biiriya inay yihiin laf dhabarta horumarka shirkada; The Pioneers of innovation and development, waxay furaan suuqyo dibedda ah, waxay horseed u yihiin isbeddellada, waxayna ka dhigayaan mid caan ka ah adduunka oo dhan; Hoggaaminta halganka adag, waxay u maareeyaan si wax ku ool ah, waxayna kordhiyaan dakhliga waxayna yareeyaan kharashka. Shaqaalaheenna leh astaamahan aadka u wanaagsan maahan oo keliya xoogagga dhaqaajinta horumarka degdegga ah, laakiin sidoo kale waa kuwa ku shaqeysta iyo kuwa dhaxlaya dhaqanka ganacsiga!
Markii uu kulanku soo idlaaday, wuxuu gudoomiyuhu jeediyay khudbad gunaanad ah ：
1. Shaqaale aad u fiican ayaa wakiil ka ah kooxdayada ugu fiican.
2. Deji bartilmaameedka iibka iyo wax soo saarka sanadka 2021, shirkadduna waxay sii wadi doontaa inay ilaaliso heerka kobaca sanadlaha ah ee ku saabsan 50%. Ugu yeer dhammaan shaqaalaha inay sii wadaan shaqada adag.
3. Raac baaqa dowladda, u dood in aan dib loogu laaban waddankii hooyo sanadka cusub illaa ay lagama maarmaan noqoto mooyee. Shirkaddu waxay siin doontaa 500 yuan asxaabta la sii jooga Shenzhen, waxayna la qaadan doontaa sanad cusub oo iyaga ka mid ah.
Waqtiga dhejinta: Feb-01-2021
Teknolojiyada Muuqaalka Muuqaalka Co., Ltd.